ဗိုက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ရင်သွေးလေးက ခင်ပွန်းဖြစ်သူ စည်ဖြိုးရဲ့အကျင့်တွေနဲ့ တူကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ခင်လွှမ်း – Cele Posts
ဗိုက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ရင်သွေးလေးက ခင်ပွန်းဖြစ်သူ စည်ဖြိုးရဲ့အကျင့်တွေနဲ့ တူကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ခင်လွှမ်း
ပရိသတ်ကြီးရေ စည်ဖြိုးလို့ ပြော လိုက်တာနဲ့ မော်ဒယ်လ် ခင်လွှမ်းကို တွဲမြင်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ၅ရက်နေ့မှာ စည်ဖြိုးနဲ့ခင်လွှမ်းတို့ရဲ့ မင်္ဂလာ မော်ကွန်းတင် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ နှင့် မင်္ဂလာဦး ဆွမ်းကျွေး အလှူကို ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး အနုပညာမောင်နှမ တွေတက်ရောက် ခဲ့ကြတာပါ။
လက်ရှိ မှာတော့ ကိုယ်ဝန်ကို လွယ်ထားရကြောင်း ပရိသတ်တွေကို တရားဝင်အသိ ပေးခဲ့ပြီး ပျော်ရွှင်အေးချမ်းစွာ အိမ်ထောင်သည် ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေကြ တာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ ခင်လွှမ်းက ” ဗိုက်ထဲမှာထဲက ဖအေ အကျင့်တေပြနေပြီ . ည မအိပ်ခင် ဘာမှမစားတတ်တဲ့ကျွန်မ ခုဆို ည မအိပ်ခင် တစ်ခုခု စားလိုက်ရမှ. သူ့ဖအေပါ စားတာနော် ။သန်းခေါင်ဆို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်တတ်တဲ့ ကျွန်မ ခုဆို ထထပြီး တစ်ခုခု စားနေရပြီ. သူ့ဖအေပါ ထစားတာနော် ။အချိုဆို လုံးဝ မကြိုက်တဲ့ကျွန်မ ခုဆို ချိုမှ စားချင်တာ . လုံးဝ သူ့ဖအေ အကျင့်တေ 😄”ဆိုကာ သူမရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူစည်ဖြိုးရဲ့အကျင့်တွေရင်သွေးလေးမှာပါနေကြောင်းပြောပြခဲ့တာပါ။
တကယ့်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးလို့ ပြောရင်မှားမယ် မထင်ပါဘူးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
ဗိုကျထဲမှာ ရှိနတေဲ့ ရငျသှေးလေးက ခငျပှနျးဖွဈသူ စညျဖွိုးရဲ့အကငျြ့တှနေဲ့ တူကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ ခငျလှမျး
ပရိသတျကွီးရေ စညျဖွိုးလို့ ပွော လိုကျတာနဲ့ မျောဒယျလျ ခငျလှမျးကို တှဲမွငျကွမယျ ထငျပါတယျ။နိုဝငျဘာလ၅ရကျနမှေ့ာ စညျဖွိုးနဲ့ခငျလှမျးတို့ရဲ့ မင်ျဂလာ မျောကှနျးတငျ လကျမှတျရေးထိုးပှဲ နှငျ့ မင်ျဂလာဦး ဆှမျးကြှေး အလှူကို ကငျြးပခဲ့တာဖွဈပွီး အနုပညာမောငျနှမ တှတေကျရောကျ ခဲ့ကွတာပါ။
လကျရှိ မှာတော့ ကိုယျဝနျကို လှယျထားရကွောငျး ပရိသတျတှကေို တရားဝငျအသိ ပေးခဲ့ပွီး ပြျောရှငျအေးခမျြးစှာ အိမျထောငျသညျ ဘဝကိုဖွတျသနျးနကွေ တာပါ။ ဒီနမှေ့ာတော့ ခငျလှမျးက ” ဗိုကျထဲမှာထဲက ဖအေ အကငျြ့တပွေနပွေီ . ည မအိပျခငျ ဘာမှမစားတတျတဲ့ကြှနျမ ခုဆို ည မအိပျခငျ တဈခုခု စားလိုကျရမှ. သူ့ဖအပေါ စားတာနျော ။သနျးခေါငျဆို နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ အိပျတတျတဲ့ ကြှနျမ ခုဆို ထထပွီး တဈခုခု စားနရေပွီ. သူ့ဖအပေါ ထစားတာနျော ။အခြိုဆို လုံးဝ မကွိုကျတဲ့ကြှနျမ ခုဆို ခြိုမှ စားခငျြတာ . လုံးဝ သူ့ဖအေ အကငျြ့တေ 😄”ဆိုကာ သူမရဲ့ခငျပှနျးဖွဈသူစညျဖွိုးရဲ့အကငျြ့တှရေငျသှေးလေးမှာပါနကွေောငျးပွောပွခဲ့တာပါ။
တကယျ့ကိုပြျောစရာကောငျးတဲ့ မိသားစုလေးလို့ ပွောရငျမှားမယျ မထငျပါဘူးနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျနျော။